China Abenzi beRubber (CR) kunye nabathengisi | UDehua
Irabha enekhlorini yimveliso yerabha esezantsi eyenziwe ngemveliso yerabha yendalo okanye irabha eyenziweyo ngomatshini ovulekileyo womxube werabha emva koko icocwa kakhulu ukuze ibe yimveliso eguqulweyo, inkqubo yayo yezobugcisa iphandiweyo kwaye yaphuhliswa yinkampani yethu ngokuzimeleyo, eyahlukileyo kwikhabhoni endala Inkqubo yesinyibilikisi ye-tetrachloride okanye indlela yesigaba samanzi. Inkqubo yethu yobuchwephesha, ukusebenza kokubambelela kunye nokuzinza kobushushu kuphuculwe ikakhulu.
Irabha eneklorin inokunyibilika okukhulu kwimethylbenzene kunye nesisombululo se-xylene .Ngenxa yokugcwala kobume bayo beemolekyuli kunye nezixa ezikhulu zeeathom zeklorine kwityathanga leemolekyuli zenza ezo zinto kunye neempawu zokwenziwa .Ifakwe kwicandelo lokutyabeka kwimizi-mveliso ngokusekwe ekusebenzeni kwayo njengeoyile. ukumelana, ukumelana ne-ozone, ukumelana neekhemikhali kunye nokubuyisela umlilo kwakhona.
I-viscosity, iiMpa (20% zeXylene, 25 ℃) 5-11 12-24 I-viscometer ejikelezayo
Umxholo wekhlorine,% 62-72 62-72 Nge-Mercuric nitrate Volumetric
Ubushushu bokubola kobushushu ℃ ≥ 120 120 Fudumeza ngokuhlamba ioyile
Ukufuma,% < 0.2 0.2 Ubushushu obomileyo obuqhubekayo
Inkangeleko Umgubo omhlophe Ukuhlolwa okubonakalayo
Ukunyibilika Akukho nto ingenakunyibilika Ukuhlolwa okubonakalayo
Uzinzile kwi-asidi kunye nealkali
Ngokunyibilika okukhulu kwii-hydrocarbon ezinamakha, ii-hydrocarbon ezinamakha e-klorini, i-aliphatic ester, i-ketone ephezulu ayinyibiliki kwi-petrolemum hydrocarbon kunye neoyile emhlophe.
Emva kokuyilwa kwayo kwefilimu, ayinalo uzinzo lweekhemikhali oluzinzileyo kuphela kodwa kunye nokunganyamezeli okuhle emanzini kunye nomphunga.
Iyanyamezela igesi yeklorine emanzi, i-CO2, i-SO2, i-H2S kunye nezinye iigesi ezahlukeneyo (ngaphandle kwe-ozone emanzi okanye i-acetic acid), uzinzo lobushushu.
Ayiphenduli ngeasidi, ialkalior ezinye iityali ezingaphiliyo zetyuwa.
Ikwanamandla aphezulu okuncamathela kunye nomgangatho weemveliso zentsimbi kunye nesamente., Isetyenziswa ngokubanzi kwipeyinti ekhethekileyo yokulwa nokudleka kunye nokubambelela.
Ukhuseleko kunye nempilo
I-CR (irabha enekhlorini) yimveliso yekhemikhali esulungekileyo ngaphandle kwentsalela yetetrachloride kwaye ayinasongo, ayinatyhefu, idangatye ilangatye, izinzile kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu.
Ukupakisha, ukugcinwa kunye nokuthuthwa
20 + 0.2kg / ingxowa, 25 + 0.2kg / ingxowa,
Ngaphandle ibhegi: PP ezinithiweyo ibhegi.
Ngaphakathi kwengxowa: PE bhanyabhanya obhityileyo.
Le mveliso kufuneka igcinwe kwindawo yokugcina impahla eyomileyo kunye nomoya ukuphepha ukukhanya kwelanga, imvula okanye ubushushu, kufanele ukuba ihanjiswe kwizikhongozeli ezicocekileyo, le mveliso iluhlobo lweempahla ezingenabungozi.
Egqithileyo Chlorinated Polyvinyl chloride (CPVC)
Okulandelayo: Iphakamileyo yePhayile ye Polyethylene (HCPE)